My freedom: Christmas 2013
ဒီနေ့ပိုစ့်ကတော့ ခရစ်စမတ်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေမယ်ထင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Orchard သွားပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တွေနဲ့ စင်္ကာပူတစ်မြို့လုံးလည်း လှနေပြီ။ Humm... အဲ့နေ့ကသွားပြီးပြီဆိုတော့ Christmas Eve တော့ သွားဖြစ်တော့မယ် မထင်ဘူး။
မနေ့က "The Hobbit 2" သွားကြည့်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်လည်း ဆန့်တငင်ငင်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ပြန်ဆက်ဦးမှာ... Gerrrrr အဲ့လိုဇာတ်လမ်းတွေကို တန်းလန်းကြီးကြည့်ရတာ မကြိုက်ဘူး(>.<)။ အမှန်က "Frozen" ကြည့်ဖို့သွားတာ... ကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာ လူပြည့်နေတာနဲ့ "The Hobbit 2" ပဲ ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ "The Hunger Games" လည်း ကြည့်ချင်သေးတယ်။ Ekk... ကြည့်ချင်တာတွေ များနေပြီ ဟဟဟ (xD)။ မနှစ်က ဒီအချိန်မှာပြတဲ့ "Rise of the Guardians" ဆိုတဲ့ Christmas Animation ကားလေး အရမ်းကောင်းတယ်။ ပျင်းရင် Online မှာ ရှာကြည့်ကြည့်နော်...
အိတ်အသစ်တစ်လုံးလောက် လိုနေတယ်။ ဒီအချိန်ဆို ဆိုင်တိုင်းလိုလိုက Discount ချနေတာဆိုတော့ ၀ယ်စရာရှိရင် ဒီအချိန်ဝယ်တာ ပိုတန်တယ်နော်။ နောက်တခါအပြင်ရောက်မှ အိတ်ရှာပုံတော်ဖွင့်ရမယ်။ အဲ့လို တစ်ခုခုကိုဝယ်မယ်ဆိုပြီးရှာပြီဆို ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ကြိုက်တာမတွေ့တော့ဘူး။ မ၀ယ်ဘူးစဉ်းစားထားရင် ကြိုက်တာအမြဲတွေ့တယ် >.<
ဓာတ်ပုံထဲက လိုးလိုးလက်လက်လေးတွေ ဘယ်လိုထည့်လဲ လာမမေးနဲ့ဦးနော်။ ကန်ဒီလည်း မသိဘူး (:P :P)။ Google+ က သူ့ဟာသူ လုပ်ပေးတာကို ယူသုံးလိုက်တာ (xD)။ Humm... ပြောစရာလည်း သိပ်မရှိဘူး။ သြော်... ဟိုတလောတုန်းက ကန်ဒီ Raspberry Leaf Tea အကြောင်းပြောတော့ ၀ယ်သောက်ကြတဲ့လူတွေ ရှိတယ်နော်။ အဲ့ဒါကိုဆေးအဖြစ်သောက်မယ်ဆို တနေ့နှစ်ခွက်လောက်တော့ ပုံမှန်သောက်ရတယ်။ အဲ့တော့မှ သူ့အာနိသင်ပိုရမှာ... အဲ့ဒါပြောဖို့မေ့ခဲ့လို့ အခုပြန်ပြောပြတာ :)
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုကိုယ်စီနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေတာမြင်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ကိုယ်ရော တချိန်ကျရင် အဲ့လိုလေး နေနိုင်မှာလား?? (I hope so -.-) ပြောရင်း ပြောရင်း Drama တွေ ပြန်ဝင်လာဦးမယ်။ ဒီနေရာမှာ ရပ်တာပဲ ကောင်းတယ် ဟဟ (xD)။ Yayy... အဂါင်္နေ့ နေ့တ၀က်ပြီးရင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အလုပ်ပိတ်တယ် :D
ကန်ဒီ့ကို Facebook က သူငယ်ချင်းတွေက ပျောက်ချက်သားကောင်းလှချည်လားတဲ့။ ပျောက်ဆို တနေ့တနေ့ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ Facebook ဘက်မလှည့်နိုင်ဘူး။ ခုဆို ခေါင်းချတာနဲ့ အိပ်ပျော်တတ်နေပြီ (ပင်ပန်းတာကိုးး >.<)။ ကန်ဒီတို့အလုပ်မှာ မြန်မာဆရာဝန်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့တို့အစား ဂုဏ်ယူလိုက်တာ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူမှာ ဆရာဝန်လိုင်စင်နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှ မဟုတ်တာ။ လူကိုတော့ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။ လူနာကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ဖုန်းတော့ပြောဖူးတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတဲ့ တွန်းလှည်းလေးကို တွန်းလာတဲ့ မြန်မာမလေးကိုမြင်တော့ စိတ်ထဲမကောင်းပြန်ဘူး။ အဲ့နေ့က ကန်ဒီ Queue No. ပေးနေတုန်း မေးစရာရှိတာနဲ့ အဘွားကြီးကတရုတ်အဘွားကြီးဆိုတော့ သူ့မမေးဘဲ တွန်းလှည်းကိုတွန်းလာတဲ့ ကောင်မလေးကို အင်္ဂလိပ်လိုမေးမိတယ်။ အဘွားကြီးက တရုတ်လို "သူက မြန်မာပြည်က လာတာ... အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်ဘူး..."လို့ ပြောတော့ စိတ်ထဲအောင့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့မှ ကောင်မလေးကို မြန်မာလို မေးစရာရှိတာမေးပြီး Queue No. ပေး... နံပါတ်ခေါ်ရင် သွားဖို့ပြောရတယ်။ သူများနိုင်ငံကိုလာပြီး စလုံးအိမ်မှာ သူများမျက်နှာကြည့်နေကြရတဲ့ မြန်မာမလေးတွေလည်း ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲတကယ်မကောင်းဘူး :(
အဲ့နားမှာ နှစ်သစ်အတွက် ဆုတောင်းလေးတွေရေးဖို့ ဘောလုံးနဲ့ဘောပင်လေးတွေ ပေးထားတယ်။ ပြီးရင် အဲ့ဘောလုံးတွေကို ရေထဲချမှာထင်တယ်။ အားလုံးအလုအယက်ရေးနေလိုက်ကြတာ ကန်ဒီလည်းရေးမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ ရုတ်တရက်ခေါင်းထဲက ထွက်မလာတာနဲ့ မရေးခဲ့ရဘူး။ Humm... ဘာဆုတောင်းရင် ကောင်းမလဲ??
I wish everybody had Peaceful Mind and Happy Life ^_^
ဆန္ဒတွေပြည့်ရပါလို၏ ပေါ့ ..........။
ကွကိုယ်ကြိုးစား :p ။
Isn't it wish for the new year?
Or, for last year?
Merry Christmas ချိုချဉ်လေး
Singapore's Christmas က မိုက်တယ်။ အနွေးထည် ၀တ် စရာ မလိုဘူး။ Santa လည်း တော်တော် အိုက်နေမှာပဲ
Merry Christmas Candy!!!
Merry Christmas ကန်ဒီရေ...